Ny Brain On Porn -
Lahatsary & lahatsoratra
Manontany tena momba ny fikarohana farany amin'ny voka-pikarohana amin'ny aterineto?
Manontany tena momba ny tsy fahafahana manao firaisana ara-nofo? Fihetsiketsehana mankany amin'ny fitaovana mahery vaika? Faniriana ambany ho an'ny lahy sy vavy? Tebiteby ara-tsosialy, olana ara-tsaina, tsy fahampian'ny motivation?
Ao amin'ny toerana mety ianao.
Fanazavana fanampiny Anarana iombonana
TENA ILAINA RESOURCES
Jereo ny lisitry ny fikaroham-bokatsika manampy sy ny fanazavana fototra momba ny siansa.
Ny fanangonam-baovao amin'ny fanadihadiana natao tao amin'ity tranonkala ity dia azo jerena eto. Ary koa, fanakianana mamitaka sy fampianarana.
Ny evolisiona dia tsy nanomana ny atidohanao ho an'ny pelaka amin'izao andro izao. Vakio ny tononkalon'ny siansa momba ny siansa manan-danja amin'ny fitantaràna mora takatra.
TEDx Talk nataon'i Gary Wilson
LATEST VIDEOS SY ARTIKELY
Mitadiava ny atidohanao amin'ny filazam-baovao amin'ny pôrnô, izay ahitana ny tantaram-piraisankina vaovao.
Manana tsy fetezana vetaveta vetaveta ve ianao? Raiso ity Quiz ity
Nihatsara be ny fiainako ara-nofo
Mihatsara ny fahatsapana ao amin'ny filahiko
Faly kokoa ny fiainana rehefa nandeha iray volana tsy nisy pôrnôgrafia
FAMPIANARANA: Moa ve ny fihinanana sary vetaveta an-tserasera mifamatotra amin'ny tsy fetezan'ny firaisana ara-nofo ivelan'ny tovolahy? Fanadihadiana multivariate mifototra amin'ny fanadihadiana iraisam-pirenena mifototra amin'ny tranonkala (2021)
18 taona - Vehivavy - Tombontsoa amin'ny fialana amin'ny pôrnôgrafia
25 taona - Avy amin'ny dysfunction erectile ka mijanona ho mafy orina aorian'ny firaisana
Fandresena ara-dalàna an'ny mpanenjika / mpanala baraka an'i Nicole Prause: izy no tompon'antoka fa tsy ilay iharan'izany!
16 taona - Mihasarotra ny olana lehibe
Taona-37: Fanatsarana ny libido
Ny mpanoratra malaza indrindra amin'ny Your Brain on Porn, Gary Wilson, dia nodimandry.
41 taona - Ny firaisana ara-nofo dia mahafinaritra kokoa ary tsy nanemotra ny ejaculation intsony aho
Forum Nuvola apps ksig.png
Ny "reboot" dia fialan-tsasatra tanteraka amin'ny fanentanana ara-nofo artifisialy, ao anatin'izany ny pôrnôgrafia amin'ny Internet. Atsaharo ny atidohanao amin'ny famporisihana sy fanabeazana ao RebootNation.org
Izay rehetra ilainao hiaina sary vetaveta maimaimpoana ary hankafizanao indray amin'ny firaisana
Fampianarana horonantsary an-tserasera izay mitarika anao amin'ny dingana tsirairay hampitsaharana ny fampiasana sary vetaveta maharikoriko sy ny fanafoanana ny fihenan-tena amin'ny filan'ny nofo, nataon'i Noa BE Church. Hamantatra bebe kokoa
Fotoana hahitana marina momba ny pôrnôgrafia amin'ny aterineto
Ny atidoha amin'ny pôrnô dia hita ao audio, ebook, ary valopy avy amin'ny $5.99. Misy fandikan-teny maromaro azo jerena.
Hividy izao Anarana iombonana
"Ny olana dia rehefa mianatra momba ny firaisana ara-nofo amin'ny alàlan'ny pôrnôgrafia ny tanora ary mieritreritra fa ny herisetra dia ampahany mahazatra amin'ny ... t.co/eOxtb92QFS
Hanombohana ny firenena Reboot
Ny "reboot" dia fitsaharana tanteraka amin'ny fanentanana ara-nofo amin'ny firaisana ara-nofo, anisan'izany ny pôrnôgrafia amin'ny Internet. Atsaharo ny atidoha amin'ny famporisihana sy fanabeazana amin'ny
Famintinana ireo hevi-dehibe
Ny atidoha amin'ny boky Porn
Pejy sy FAQ lehibe
Lahatsoratry ny vohikala ED
Mipoitra tsikelikely amin'ny olana ara-pananan'ny tanora
Ireo manam-pahaizana izay miaiky fa PIED
Inona no lazain'ny manam-pahaizana momba ny mpitsaran'ny PIED
Fanitsiana lahatsoratra fototra
Fitaovana fanovana sy fanarenana
Safidy ho fanampiana sy fanampiana
Torohevitra avy amin'ny mpikomy mahomby
Famerenana amin'ny laoniny & FAQs fampiasana sary vetaveta
Famerenana ny fanavaozana (fanavaozana) Self-Report
Forums, Blogs, Lohahevitra
Fanabeazana ny mpitsabo
Fikarohana fikarohana fototra
Fandinihana momba ny fandinihan-tena amin'ny mpampiasa Porn
Fampianarana mampiahiahy sy diso
ICD-11: Aretina mampiady saina
Fikambanana Amerikanina misahana ny fiankinan-doha
Horonantsary & ARTICLES